सुर्य जी निकै रमाइलो यात्रा भएछ .....
हरेक यात्राहरु उस्तै र राम्रा हुदैनन तर केहि यात्राहरु राम्रा र विर्सनै नसकिने खालका पनि हुन्छ ! त्यहि विर्सन नसकिने खाल्का यात्राहरुले
यस्ता भाव उत्पन्न गराउछन ...
बर्षौ सम्म - भनका भाव फुटाउने "
एउटा कुरा सुर्य जी -ती नानीले सुन्तलाको बोक्रा आफ्नो हेण्ड ब्याग्मै राख्ने सभ्यता निकै घत लाग्यो !
राम्रो र सुन्दर यात्रा रहेछ। रोचक लाग्यो। १२ धन्टाको यात्रा (जाम सहित) भन्ने सम्म आइपुग्दा लेखाईमा ईमान्दारिता देखाउनु भएको आभाष भो। रोचक लाग्यो है।
भन्छन् नि खुशी आफैं आउँदैन,बोलाउनु पर्छ । अनि रमाइलो पनि आफैं हुँदैन बनाउनु पर्छ । यो पोस्ट पढ्दा भने मलाई यस्तै लाग्यो । निरस र पट्यार लाग्ने लामो यात्रालाई तपाईँले रमाइलो बनाउनु भएछ (पढ्दा पनि रमाइलै भयो:)।
सुरुआत र समाप्ति त हरेक चिजसँगै आउने गर्छ, १२ घण्टको यात्रा वा ८० वर्षको जिन्दगी । तर कुनै कुनै सुरुआत आफैंमा पूर्ण हुन्छन् । लाग्छ यस पटकको तपाईँको यात्रा पनि यस्तै रह्यो । रोचक प्रस्तुति ।
सुन्दर प्रस्तुती, यात्राको स्वर्णिम बर्णन । रमाइलो लाग्यो पढेर ।
wonderful journey . thanks for sharing surya bro-- manoj
यात्रा त गज़ब रमाइलो भएछ सुर्यजी, विशेष गरि मौनताको घैटो फुटाएर तपाइले यात्रा निकै रोचक बनाउनु भएछ । यसरी हिड्दा संगैको यात्रीसंग भलाकुसारी गर्दै अघि बढ्दा बाटो काटेको पत्तै हुदैन ।
यो यात्राको जस्तै जीवनमा यसरी नै सबै कुरा रमाइला हुदै जाउन्, जुरून् ।
हो, मलाई पनि तेस्तै लाग्यो यात्रामा मिल्ने साथी भए जस्तो सुकै कठिन यात्रा पनि रमाइलो हुने रहेछ भने कथनलाई पुरा गर्यो यो यात्राले। शाब्दिक यात्रामा हातेमालो गर्दै मिठा सुझाव पोख्ने सबैलाई धन्यबाद ।